Indlela yokuSebenzisa iAkhawunti ye-Instagram okwethutyana okanye ngokusisigxina Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ungayenza njani i-akhawunti ye-Instagram okwethutyana okanye isigxina?
Julayi 8, 2019 0 IiCententarios 1523
Ngaba ufuna ukwenza iakhawunti ye-Instagram ingasebenzi? Ngaba ufuna ukuzinika ikhefu ukuze uthathe isigqibo sokuba uyafuna ukuqhubeka nenethiwekhi? Ukuba le yimeko yakho, ke ukwindawo elungileyo. Ewe, namhlanje ndiza kukufundisa ungayenza njani i-akhawunti ye-Instagram okwethutyana okanye isigxina.
Enye ye Iimpawu ezizodwa ukuze ube nakho ukwenza lo msebenzi Oko kukuthi, uya kudinga ukuhlala imizuzwana embalwa phambi kwekhompyuter yakho kwaye ungene kwi-Instagram.com. Kuba, awukwazi ukwenza le nkqubo kwisixhobo sakho esiphathwayo. Nangona kunjalo, yinkqubo ekhawulezayo nelula engayi kukuthatha ixesha elide.
Ukwenza lula inkqubo endikulungiselele yona a inyathelo ngesinyathelo. Oko kuya kukunceda usebenze iakhawunti yakho ye-Instagram ngokukhawuleza, ngokufanelekileyo nangokufanelekileyo, nokuba kukwethutyana okanye ukuba ukhetha ngokusisigxina. Qhubeka nokufunda!
Ngawaphi amanyathelo anokusebenza iakhawunti yam ye-Instagram okwethutyana?
Ngamanye amaxesha, siziva sinemfuno yokuqhawula kwiitayile zentlalo. Kodwa, kunye nezaziso ezingagungqiyo eziza nesixhobo sethu, sifumanisa ukuba akunakwenzeka ukuba bazilibale.
Ukuba ufuna ukuthatha ixesha lokuzinika ikhefu kwinethiwekhi yakho, unakho yenza iakhawunti yakho ye-Instagram ingasebenzi Okwethutyana. Kuya kufuneka ulandele nje olu manyathelo lwamanyathelo:
Inyathelo 1: Faka iprofayile yakho
Ukusuka kwi-PC, ngena kwi-akhawunti ye-Instagram ofuna ukuyenza okwethutyana ukuya kwiprofayile yakho. Kuya kufuneka ucofe i-aykhoni enomntu, ebekwe kwicala lasekunene lephepha.
Nje ukuba ube kwiprofayile yakho, yiya ngqo kwigama lakho lomsebenzisi ukukhetha ukhetho hlela iprofayile.
Inyathelo 2: Yenza iakhawunti yakho isebenze okwethutyana
Emva kokungena kwiphepha lokuhlela iprofayile, uya kuyibona ngoko nangoko yonke idatha yakho oyifakileyo xa wawusenza iakhawunti.
Ngasezantsi kwiphepha, emva kwebhayiloji yakho kunye nolwazi lwakho lwangasese. Uya kufumana, ikhonkco eliluhlaza okwesibhakabhaka, elitsho ngokucacileyo yenza iakhawunti yam isebenze okwethutyana. Kuya kufuneka ucofe kwikhonkco, kodwa ayisiyiyo yonke into ephelela apho. Iya kuvula kuphela elinye iphepha apho uya kuqala inkqubo yokwenza iakhawunti kwi-Instagram.
Inyathelo 3: Gqibezela inkqubo
Ikhonkco liza kuvula elinye iphepha ukugqiba inkqubo. Kweli phepha uzakubona ithebhu eyehlayo, ethi, ubuze, Kutheni ufuna ukukhubaza iakhawunti yakho? Eli nyathelo lilula kakhulu. Kuya kufuneka ukhethe enye yeempendulo ze9 eziboniswe kwithebhu eyehlayo ethi:
Ndixakeke kakhulu / deconcentrate me kakhulu.
Ndenze enye iakhawunti.
Ndifuna ukucima umxholo othile.
Zininzi kakhulu iintengiso.
Ndinexhala lokuba ngasese.
Andifumani bantu mabalandele.
Ngale ndlela, unokucacisa isizathu sokuba wenza i-akhawunti yakho ye-Instagram.
Ke, ukhuseleko kwaye uqhubeke ngenkqubo kufuneka ufake iphasiwedi. Nje ukuba iphasiwedi ifakiwe, uya kuba nokufikelela ngokuzenzekelayo kukhetho Khubaza i-akhawunti okwethutyana. Ukucofa iqhosha lonke ulwazi lwakho olunikezwe kwiakhawunti ye-Instagram luya kufihlwa de uthathe isigqibo sokuyenza kwakhona.
Kwenzeka ntoni ukuba ndenza iakhawunti ye-Instagram okwethutyana?
Xa ugcina iakhawunti ye-Instagram okwethutyana, ifihla:
Zonke iifoto zakho
Zonke izimvo ozenzileyo.
Ngale ndlela, kuya kubonakala ngathi iakhawunti yakho ayizange ibekho. Ke ngoko, ngokuqinisekileyo akukho mntu uya kufikelela kulwazi lwakho.
Ukwenza umthambo okwethutyana kulungele abo bantu bafuna nje ukuthatha ikhefu kunxibelelwano lwentlalo. Ewe, lo msebenzi ukuvumela ukuba ufihle ulwazi lwakho ixesha elide njengoko ufuna.
Xa uthatha isigqibo sokuyenza kwakhona iakhawunti yakho, Kuya kufuneka uqale eli candelo ngendlela obuya kwenza ngayo. Kwaye ngokukhawuleza kwaye ngokuzenzekelayo lonke ulwazi lwakho luya kuphinda lubonakale.
Ngawaphi amanyathelo anokucima iakhawunti yam ye-Instagram?
Uninzi lwabantu luyakhathala lelo dijithali lehlabathi elibizwa ngokuba yinethiwekhi yoluntu. Mhlawumbi, unobangela kukungakhuseleki ngasese, kuba ukugcina iifoto ziyimfihlo akusoloko kwanele.
I-Instagram izisa ngokungagqibekanga ukhetho lokukhetha ukwenza iakhawunti yakho okwethutyana. Kodwa Kwenzeka ntoni ukuba ufuna ukucima iakhawunti yakho ngokusisigxina? Eli nqaku le-Instagram liphantse lafihlwa.
Emva kophando olwenziweyo kumaphepha oncedo e-Instagram, sifumene ikhonkco elifihliweyo, eliya kukuvumela ukuba wenze iakhawunti yakho ngokusisigxina. Ewe, ngokucinezela iqhosha Cima iakhawunti yam ngokusisigxina, akukho kubuyela umva. Ngokuqinisekileyo yonke into iya kupheliswa ngonaphakade.
Ukwenza le nkqubo kubalulekile ukuba ukhumbule oku kulandelayo ngokugqibeleleyo:
I-imeyile oyenzileyo iakhawunti.
Ukuba uzimisele ukwenza le nkqubo, kuya kufuneka ulandele la manyathelo:
Inyathelo 1: Ngena kwiakhawunti yakho
Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukungena Instagram.com Ukungena ungene kwikhompyuter, kuba akunakwenzeka ukwenza le nkqubo ngesixhobo esikwiselfowuni.
Inyathelo 2: Cofa kwikhonkco
Ukuqhubeka nenkqubo yokucima iakhawunti yakho ye-Instagram ngokusisigxina, konke ekufuneka ukwenzile kukufaka le dilesi I-instagram.com/accounts/remove/request/permanent/. Yiphepha elithile elenziwe nge-Instagram, elingabhengezi kakhulu. Ke ngoko, ukufikelela kulo msebenzi kwiwebhu yenethiwekhi yeefoto kuyinkimbinkimbi.
Ukuba sele ungene ku-Instagram.com iphepha liya kukuqonda ngokuzenzekelayo kwaye unako Gqibezela inkqubo ngokuchofoza nje kathathu.
Inyathelo 2: Kutheni ufuna ukuya?
Njengendlela yokuyekisa ukusebenza okwethutyana, kuya kufuneka uchaze kwi-Instagram kuba ufuna ukucima iakhawunti yakho. Ukwenza oku, bakunika iimpendulo ze8, eya kuthi ukhethe enye enxulumene nesigqibo osenzayo.
Kuxhomekeke kwimpendulo yakho, i-Instagram iya kukubonelela ngezisombululo ezizezinye zokukunceda usombulule ingxaki onayo kunye nenethiwekhi yokufota yoluntu. Konke oku, ngeenjongo zokukuthintela ekucimeni iakhawunti yakho.
Inyathelo 3: Ukuqhubeka, faka iphasiwedi kwakhona
Nje ukuba impendulo yakho ikhethwe, ungaqhubeka ngenkqubo. Okulandelayo, uza kubona ibhokisi apho ucelwa ukuba uphinde ufake igama lakho eliyimfihlo kwindawo ethambileyo kwicala lasekunene.
Inyathelo 4: Cima iakhawunti yakho ngonaphakade
Xa sele wenze, ungacofa kwiqhosha elibomvu, elitsho ngokucacileyo cima iakhawunti yam ngonaphakade
Ukuba ucinezela iqhosha akukho ukubuyela umva, yonke idatha yakho iya kucinywa ngonaphakade ngaphandle kokuphinda ufumane kwakhona.
Kwenzeka ntoni ukuba ndicima iakhawunti ye-Instagram ngokusisigxina?
Xa ugqibile ukwenza iakhawunti ye-Instagram ngokusisigxina, iya kucinywa ngonaphakade.
Njengenyathelo lokhuseleko, i-Instagram ilumkisa ukuba, ukuba uthatha isigqibo sokuyila enye iakhawunti kwinethiwekhi yezoluntu kwixa elizayo, ngekhe ubhalise ngegama lomsebenzisi elifanayo. Ngale ndlela, akukho mntu unokulinganisa ukuba ngubani obeneakhawunti esusiweyo.
Ukwenza iakhawunti ye-Instagram kuya kucima ngokusisigxina:
Bonke abalandeli bakho.
Nalo naluphi na ulwazi lweakhawunti.
Ngenxa yokuba awuyi kuba nokukhetha ukuphindisa Ndiyakucebisa, ukhuphele iifoto kunye nevidiyo ongafuniyo ukuphulukana nayo. Ukusukela, xa sele kwenziwe kwinkqubo yokupheliswa, awusoze ube nokufikelela kumxholo weakhawunti yakho.
Ngenxa yokuba awusenomdla wokuqhubeka ungene kwi-Instagram. Kwaye, nokuba ucime iprofayile yakho kwinethiwekhi yoluntu kunye ne-Intanethi. Ndiyakucebisa, ukhuphele isicelo kwisixhobo sakho esiphathwayo. Ewe, oku akusayi kuphinda kufezekise nawuphi na umsebenzi kwaye kuya kuthatha kuphela indawo kwimemori yesixhobo sakho.
Ngale ndlela, sigqibezela iposti yethu ungayenza njani i-akhawunti ye-Instagram okwethutyana okanye isigxina.
Njengoko ubona zombini iinketho ziya kukuvumela ukuba unyamalale kwi-intanethi, ikushiye ungabonakali kubalandeli bakho. Ke, nabani na ozama ukukufumana uyakufumana kungenakwenzeka ukufumana iprofayile yakho kwiwebhu. Ngale ndlela, zombini Iindlela zokwenza umsebenzi zingasebenzi Ukufota okwethutyana okanye ngonaphakade kwi-Instagram.
1 Ngawaphi amanyathelo anokusebenza iakhawunti yam ye-Instagram okwethutyana?
1.1 Inyathelo 1: Faka iprofayile yakho
1.2 Inyathelo 2: Yenza iakhawunti yakho isebenze okwethutyana
1.3 Inyathelo 3: Gqibezela inkqubo
1.4 Kwenzeka ntoni ukuba ndenza iakhawunti ye-Instagram okwethutyana?
2 Ngawaphi amanyathelo anokucima iakhawunti yam ye-Instagram?
2.1 Inyathelo 1: Ngena kwiakhawunti yakho
2.2 Inyathelo 2: Cofa kwikhonkco
2.3 Inyathelo 2: Kutheni ufuna ukuya?
2.4 Inyathelo 3: Ukuqhubeka, faka iphasiwedi kwakhona
2.5 Inyathelo 4: Cima iakhawunti yakho ngonaphakade
2.6 Kwenzeka ntoni ukuba ndicima iakhawunti ye-Instagram ngokusisigxina?
Yintoni omele uyazi malunga nendlela esebenza ngayo i-Instagram